UN Human Rights Council Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka godhu Human Rights Watch gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured UN Human Rights Council Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka godhu Human Rights...
UN Human Rights Council Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa akka godhu Human Rights Watch gaafate
Baatii Sadaasaa kaasee naannoo Oromiyaatti Oromoo hiriira nagaa bayan irratti humnoota mootummaan Itoophiyaa bobbaaseen yakki hamaa fi dhiittaan mirga namaa cimaan raawwatamaa turuu saaxila Human Rights Watch. Gocha suukkanneessaa fi haala yaachisaa Oromoo irra gayaa jiru kana dhaabsisuu fi yakkamaa seeratti dhiyeessuudhaaf Gumiin Mirga Namoomaa Biyyoota Gamtoomanii (UN Human Rights Council) Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu hunda akka godhuuf Human Rights Watch gaafate.
‘Yakki Itoophiyaa keessatti Oromoo irratti raawwatame hedduu cimaa ta’us xiyyeeffannaa barbaachisu addunyaa irraa hin arganne,’ jedha Human Rights Watch. Gocha badii ummata nagaa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuu qaba Gumiin kuni. Kana qofa osoo hin taane, akka HRW itti, dirqamni dhimmichi xiyyeeffannaa barbaachisu akka argatu godhuus kan jiru Gumiin Mirga Namoomaa Biyyoota Gamtoomanii kana irra.
Mootummaan Itoophiyaa humna daangaa ce’etti dhimma bayaati ummata nagaa ajjeesaa fi madeessaa kan ture. Gumiin Mirga Namoomaa Biyyoota Gamtoomanii Itoophiyaan humnatti akka hin fayyadamne akeekkachiisuu fi namoota daandii irraa guuramaa hidhaman gadi lakkisiisutu irraa eegama, akka waamicha Human Rights Watch kanatti.
Human Rights Watch yakki hojjatamee fi gidiraan raawwatame qaama wolabaan akka qoratamuufis dhiibbaa barbaachisu Gumiin Mirga Namoomaa kanaan godhamuu qaba. Qorannoo wolaba, amanamaaa fi kan hin loogne geggeessuudhaaf qaamni Idil-addunyaa koree qorannoo dhaabbatuu malu keessatti hirmaannaa cimaa qabaachuun akka isa barbaachisu jala sarareera, Human Rights Watch. Yoo kuni ta’e qofa dhugaan kan ifnana aduu argitu.
ajjeechaa fi gidiraa naannoo oromiyaa
dhiittaa mirga namoomaa
gaafii maaster pilaanii
Previous articleGumiin Mirga Namoomaa Itoophiyaa woraanni Itoophiyaa Oromoo heddu ajjeesuu, gudeeduu fi gidiruu saaxile
Next articleUmmata beelaye miliyoona 10 oli du’a irraa hanbisuuf gargaarsa doolaara biliyoona 1.4 barbaachisa jedhame